Rose of Sharon: အမိမြေသို့အပြန် (အပိုင်း၃)
Posted by rose of sharon at 11:51 AM
ဟုတ်တယ် မမ ခရီးသွားတယ် ဆိုတာ စိတ်ပြေလက်ပျောက် အပန်းဖြေချင်လို့အဲ့ဒါကို တည်းတဲ့နေရာ စားတာသောက်တာ အဆင်မပြေရင် အရမ်းစိတ်ညစ်ရတယ် မြန်မာ မှာက အဲ့ဒီ့ ဝန်ဆောင်မှု အရမ်းအားနည်းတယ် တဖြည်းဖြည်းနဲ့ တော့ မြန်မာလည်း အဆင့်အတန်းမှီအောင် လုပ်လာမယ်လို့ မျှော်လင့်ရတာပဲ အထူးသဖြင့် အိမ်သာတွေကအစ သန့် ရှင်းပီး ကျန်းမာရေးနဲ့ ညီညွတ်ဖို့ လိုအပ်တာ
ဗီယက်နမ်ကို လွမ်းနေတဲ့ ညီမ
မိုးငွေ့...... September 9, 2011 at 2:01 PM
အမကလေးလေးတွေကချစ်စရာလေးတွေ ပုံတင်ပေးတဲ့အတွက် ကျေးဇူး...။ အဲဒီစိမ်းလဲ့တင်ကို နှစ်စတုန်းက ကျိုက်ထီးရိုးသွားတော့ တစ်ညတည်းဖြစ်သေးတယ် ဟုတ်တယ်... ညစ်ပတ်တယ် ယူတဲ့ ပိုက်ဆံနဲ့မတန်ဘူး သာမန်တည်းခိုခန်းသာသာပဲရှိတာ...။
T T Sweet September 9, 2011 at 2:23 PM
ရို့စ်ရေ ... ဒီလိုပါပဲ... ပြန်ဖြစ်တဲ့အခါတိုင်း စိတ်လျှော့ထားပါတယ်။ ရန်ကုန်မှာတော့ တက္ကစီတွေ ညစ်ပတ်တာ၊ စုတ်တာတော့ လက်ဖျားခါတယ်။ တစ်ခါတစ်လေ တက္ကစီက တံခါးတောင်ပြုတ်နေလို့ စီးတဲ့သူက ကိုင်ပေးရသေးတယ် ... တကယ် ...
Nyi Linn Thit September 9, 2011 at 2:25 PM
စိမ်းလဲ့တင် ဆိုတာတွေ့တော့ မသိသေးတဲ့ နေရာအသစ်တစ်ခုအကြောင်း သိရပြီဆိုပြီး ဝမ်းသာအားရ ဖတ်လာတာ...၊ အခုလို သိရတာ ကျေးဇူးပါပဲ မရိုစ့်ရေ..၊ ဝန်ဆောင်မှုဆိုတာ ဘာလဲဆိုတာ ဒီလိုနေရာတွေ ဖွင့်ထားသူတွေ ကိုယ်တိုင် ကောင်းကောင်းသိဖို့ လိုသလို၊ သိတဲ့အတိုင်းလည်း တကယ်ပေး နိုင်အောင် အားထုတ်သင့်ပါတယ်၊ အထူးသဖြင့် ကြော်အောင် မညာ(ငြာ) ဘဲနဲ့ အရှိအတိုင်း ရိုးရိုးသားသားပဲ ဖြစ်သင့်တယ်..။
Kay September 9, 2011 at 4:25 PM
တို့တွေ့ခဲ့တဲ့ စိမ်လဲံတင် ထက် ဆိုးနေပီလေား..း(
ခင်မင်းဇော် September 9, 2011 at 5:20 PM
အမလဲ ၀င်ရေးမလို့ ကေသွယ် စိမ်းလဲ့တင်အကြောင်း ရေးဖူးတယ်ဆိုတာ။
Angelhlaing(May everybody be happy and healthy! September 9, 2011 at 11:53 PM
စိမ်းလဲ့တင်က နာမည်ကြိးနေတာ မမရေ အဲလိုကြီးလား မကောင်းပါဘူးနော် ..ဆိုးပ :(
တောင်ငူသား September 10, 2011 at 12:13 AM
အမရယ် ကင်ပွန်းစခန်း နီးနေပြီပဲ ကျိုက်ထီးရိုးတောင်ပေါ် ကားနဲ့တက်ပြီး ကျိုက်ထိုဟော်တယ်မှာ တစ်ညအိပ် နောက်နေ့နေ့လယ်မှာ ပြန်ဆင်းရင် စနေညအမှီ ရန်ကုန်ပြန်ရောက်ပါတယ်။
တောင်ပေါ်တက်ရင် လေကောင်းလေသန့်လဲ ရှူလို့ရသလို ကလေးတွေလဲ ဗဟုသုတရပြီး ပျော်မှာသေချာပါတယ်။
ချော(အစိမ်းရောင်လွင်ပြင်) September 10, 2011 at 12:18 AM
စိမ်းလဲ့တင်ကို ဖြတ်သွားဖြတ်လာ တွေ့ရတာတော့ သိပ်ကောင်းတော့မလိုနဲ့
ညိမ်းနိုင် September 10, 2011 at 8:53 PM
ကျွန်တော်ရောက်ခဲ့တဲ့ စိမ်းလဲ့တင်က အဲ့လိုဟုတ်ဘူးဗျ...၊ရေကူးကန်တွေလည်း
သန်ု့သား...၊အင်း...လွန်ခဲ့တဲ့ သုံးနှစ်ကျော်လောက်ကပေါ့နော်..၊ခုတော့ ထိန်း
SHWE ZIN U September 10, 2011 at 9:29 PM
ဒီလိုတွေကြီးဘဲ ဆိုးထာ ညီမရယ် ရှက်စရာကောင်းပါတယ်
khin oo may September 11, 2011 at 12:14 PM
ဗဟုသုတရသွား၏. ကျိုက်ထီးရိုးသွားချင်တယ် ညီမရေ. အချိန်တွေ နမျောစရာ။ ရန်ကုန်နေတဲ့ရှားရှားပါးပါးအချိန်လေး နစ်ရက် ကုန်သွားတာ သိတ်သမျှောတယ်။ ပိုက်လဲကုန်သေး ဒေါသလဲထွက်ရသေး။ ရက်တွက်ပြီးလာရတဲ့သူ သနားပါတယ်။
khin oo may September 11, 2011 at 12:15 PM
sosegado September 14, 2011 at 1:02 PM
စိမ်းလဲ့တင် အစားအစာတွေက အကြိုက်တွေ့ပါတယ် ရွေးစရာသိပ်မရှိတာပါပဲ၊ သနပ်ခါးတောင် အလားကားလိမ်းလို့ရတယ်၊ နည်းနည်းမြင့်တဲ့ လမ်းဘေး စားသောက်ဆိုင်ပါပဲ၊ တည်းခိုးတဲ့သူနည်းသလောက်ပဲ ရှားရှားပါးပါး သွားတည်းရတယ်လို့၊
kiki July 31, 2012 at 11:11 AM
ဟယ်...ဒီပုံစံအတိုင်းသာဆို ကမ္ဘာလှည့်ခရီးသည်တွေ မြန်မာပြည်ကို ဝင်ရောက်လည်ပတ်တဲ့ အခါ ...အဆင့်မြင့် မဟုတ်တောင် အဆင့်မှီတည်းခိုဖို့မလွယ်သေး ပါလား ။
ဒီနိုင်ငံမှာတော့ ကြော်ငြာထဲက အတိုင်းမဟုတ်ရင် လျော်ကြေးတောင်းလို့ရတယ် ။ ( ဖွပေးလိုက်သည် )...
Kaung Thant Xin September 19, 2012 at 12:54 AM
အခုစိမ်းလဲ့တင်ကိုလာလည်ကြည့်ပါ။အစ်မ ကျေနပ်မှုမရှိရင် အစ်မကြိုက်သလိုဝေဖန်ပြောဆိုနိုင်ပါတယ်။အခုလို အမှားတစ်ခုကို